Barcelona oo taalo u dhisaysa xiddigoodii Johan Cruyff
Arsene Wenger: Dhawaan ayaan shaacin doonaa go’aankeyga Arsenal
Tababaraha kooxda Arsenal, Arsene Wenger, ayaa sheegay in uu dhawaan shaaca ka qaadi doono mustaqbalkiisa naadigaasi. Wenger ayaa hadalkan jeediyay ka dib guuldaradii 3-1 ahayd ee shalay galab kasoo gaartay kooxda ...
Man City oo ka hartay horyaallada Yurub
Kooxda Manchester City ayaa ka hartay tartanka horyaallada Yurub, ka dib markii xalay 3-1 ay uga adkaatay Monaco oo gurigeeda lagu dheelayay. Kooxda macallin Guardiola ayaa daqiiqadii 71-aad ciyaarta ka dhigtay ...
Gooshii uu Zlatan Ibrahimovic dhaliyay ciyaarta oo sii dhamaanaysa ayaa xaqiijiyay hanashada koobka EFL Cup. Waana koobkii koobaad ee uu kooxda u soo hoyiyo tababaraha Manchester United Jose Mourinho tan iyo ...
Warbixin sir ah oo la helay ayaa tibaaxday in tabobaraha Maraykanka ah ee lalya xiddiga ciyaaraha Olombikada, Mo Farah, ay suurto gal tahay inuu jabiyey xeerarka mamnuucaya adeegsiga dawooyinka kordhiya ...
Sidee looga hadlay eryidda Ranieri?
Tababarihii la eryey ee kooxda Leicester Claudio Ranieri ayaa markii ugu horreysay eryidiisa ka hadlay, isagoo sheegay in riyadiisii ay dhimatay. Guushii lama filaanka ahayd ee Leicester ay ku guulaysatay horyaalka ...
Wakiilka Wayne Rooney, Paul Stretford ayaa ku sugan dalka Shiinaha si uu u soo fiiriyo bal in uu wada xaajood u soo samayn karo ciyaaaryahankan afka hore uga dheela Manchester ...
Man City oo 5-3 uga adkaatay Monaco
Xalay waxaa la dheelay laba kulan oo ka tirsanaa horyaalka Yurub wareegga loogu soo baxayo rubuc dhammaadka. Ciyaarta ugu xiisaha badneyd ayaa ah tii dhexmartay Manchester City iyo Monaco, oo ay ...
Mesut Ozil ayaa rumaysan in marmarsiinyo looga dhigtay dhibaatada haysata Arsenal, sida uu sheegay wakiilkiisu. Ozil oo 28 jir ah ayaa la dhaliilay ka dib markii Arsenal ay soo wajahday guuldarradii ...